Burmese taste - Iora: ငါးစုစီကြော်၊ နဲ့ လက်ဖက်သုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်၊ အာပြဲခြောက်ဖုတ်
Posted by Iora at 2:31 AM
Anonymous March 6, 2011 at 3:01 AM
အိမ်မှာ ဂျင်းသုပ်စားတယ်ခရမ်းချဉ်သီးသုပ် စားချင်လိုက်တား)
နေကောင်းအောင် ဆုတောင်းပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ပြောသလောက် နေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်တွေရှူပ် ခရီးတွေထွက်နေလို့ပါ
ညီလင်းသစ် March 6, 2011 at 7:55 AM
ဟုတ်တယ်နော်၊ ငါးက ဒီအတိုင်းမလှဘူး၊ ကြော်လိုက်မှ ပိုလှလာတာ..၊း)
လက်ဖက်ကလည်း သွားရည်ယိုချင်စရာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ငရုတ်သီးစိမ်းက တော့ ၂ တောင့်ထဲလားဗျာ...၊း(
ခံတွင်းလေး စိုလာစေလို့ ကျေးဇူး...။
၀မ်းသာသွားပြီ နေမကောင်းတာ ပြောပလောက်အောင်မှုတ်ဖူးဆုိုလို့ ။
ဒါဆုို..ကုိုယ့်ဘ၀မှာ လက်ဖက်သုပ်မကြိုက်တဲ့သူ..ကြုံဘူးတာ ၃ ယောက်ရှိသွားပြီ။
ငါးကစားစရာမရှိတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်.. ပုံပြောင်းလိုက်မှ သူရောကုိုယ်ရောစားဖြစ်မှာလည်းဖြစ်..လွှင့်ပစ်ရမှာကလည်းနှမျောစရာမို့လေ။ အိမ်ရှင်မဆိုတော့အလေအလွင့်မရှိအောင်စီမံဦးမှ..(တကယ်တော့မချက်ဖြစ်၊မစားဖြစ်၊မစားချင်တော့လို့ လွှင့်ပစ်ရပေါင်းကများနေပါပြီ။) လက်ဖက်ထဲမှာ ငြုတ်သီးကထဲ့နယ်ထားပြီးသား။ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ။ အရမ်းစပ်လို့ ၂တောင့်ဘဲ ကိုက်စားဘုို့လုပ်ထားတာ။စိတ်မပူနဲ့ နော်..အထုပ်လိုက်ရှိပါသေးတယ်။ :D
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ ဘေဘီ နဲ့ ကုိုညီလင်းသစ်ရေ
ဂငယ် March 6, 2011 at 1:33 PM
Iora March 6, 2011 at 6:09 PM
လက်ဖက်သုပ်စပ်စပ်လေး ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ အကြိုက်တုတွေပေါ့။
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး March 6, 2011 at 6:34 PM
ငါးစူစီကြော်ဆိုသိပ်ကြိုက်။ ငါးခူကိုဆိုအဲလိုစူစီကြော်မှစားတာ။ ချက်ရင်မစားဘူး။ လက်ဖက်သုပ်လေးက စားချင်စရာလေး။ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်လည်း သုပ်မစားဖြစ်တာကြာပြီ။ စားစရာတွေကစုံမှစုံပဲနော်။
Iora March 6, 2011 at 9:39 PM
ကုိုယ်တို့ တအိမ်လုံးလည်း စူစီကြော်ကြိုက်ကြတယ်။ ပဲဟင်း ကုိုဆူးပုပ်ရွက်တို့ ဂွေးထောက်ရွက်တို့ ခပ်ပြီး တွဲစားဖြစ်ကြတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်ကမေ့မေ့နေတယ်။ ဟင်းမရှိမှ ဖြစ်ညှစ်စဉ်းစားတော့မှ စားဘို့ သတိရရလာတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 6, 2011 at 11:37 PM
အမေ ခဏ အလည်လာတော့ အလုပ်က မောမောနဲ့ပြန်လာတဲ့သမီးအတွက် ညနေစာမစားတဲ့ အမေက အာပြဲခြောက်ဖုတ်လေး ဆီဆမ်းပြီး လုပ်ပေးတာ စားလို့ကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ခုတော့ ပိုသတိရသွားပြီ။
Iora March 7, 2011 at 12:59 AM
ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာတုန်းကလို ဇွန်းလုစားရတာတို့ ၊ မ၀လို့ ထပ်သုတ်ရတာတို့ မရှိတော့ သိပ်အရသာမရှိဘူး။
ငွေစန္ဒာ March 7, 2011 at 11:24 AM
Iora March 7, 2011 at 3:30 PM
I thought I was older than you. Anyway, I like to leave it as puzzle.
သက်ဝေ March 7, 2011 at 6:57 PM
ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ထားတာတွေရော ဓါတ်ပုံတွေရော သိပ်လှလို့ အလွန်သဘောကျသွားပါတယ်...
Iora March 8, 2011 at 12:06 AM
ပြီးတော့လာလည်တဲ့အတွက်ရော၊ Link ယူသွားတဲ့အတွက်ရော ၀မ်းသာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ အားတဲ့အခါလည်း ထပ်ပြီးလာလည်ပါဦးလို့ ဖိတ်ပါရစေ။